ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့ အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ် – Nyang Media
ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့ အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်
ဇန်နဝါရီ 03, 2018
ငြမ်း / ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၉၄)ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် ရေနုတ်မြောင်းများ ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် လမ်းများပြုပြင်ရန် ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဘတ်ဂျက်မှ ကျပ်ငွေ(၄ ဒသမ ၉) ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဘတ်ဂျက်ငွေဖြင့် သတ်မှတ် ထားသော လုပ်ငန်းများကို ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ဆုံးရန် (၃) လခန့်အလိုမှ တက်သုတ်ရို က်ဆောင်ရွက်ရန် စတင် လုပ်ဆောင်နိုင် ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်၏ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် ကို ငြမ်းမီဒီယာက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါသည်။
ငြမ်း – ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့ အစိုးရကနေ ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက် ချပေးလဲ ဆိုတာကို စ ပြောပေးပါ။
DPPK – ကျွန်မတို့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြည်ထောင်စုကနေ ပေးတဲ့ဘတ်ဂျက် တစ်မြို့နယ် ကို ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀) ပေးတယ်။ ကျပ်သိန်း (၁၀၀၀) ဆိုတာကို ရပ်ကွက် အရေအတွက်နဲ့ စားပြီး တစ်ရပ်ကွက်ကို ကျပ်သိန်း (၅၀) စီ ရတာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ပြည်ထောင်စုက ကိုင်တဲ့ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနက ချမှတ်ထားတဲ့ ဘတ်ဂျက်က တစ်နှစ် တစ်နှစ် အမှန်မရှိဘူး။ ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စဖြစ်လာတုန်းက တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာတွေကို ချပေးတဲ့ ဘတ်ဂျက်ပေါ့။ ကျွန်းရွှေဝါလမ်း၊ ပိတောက်လမ်းကို ချပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်က ငွေလုံးငွေရင်း ဘတ်ဂျက်ပါ။ အဲဒီကနေ ချပေးတဲ့ ကျပ်(၄ ဒသမ ၉) ဘီလီယံက ပြည်ထောင်စုက ချပေးတဲ့ ဘတ်ဂျက်ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျပ်သိန်း (၅၀) ဘတ်ဂျက်က ရှိနေတယ်။
ငြမ်း – အခု ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ချပေးတဲ့ ငွေလုံးငွေရင်း ဘတ်ဂျက် ကျပ်(၄ ဒသမ ၉)ဘီလီယံကို ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အခါ ဘယ်ဌာနတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေပါသလဲ။
DPPK – ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ ကျပ်(၄ ဒသမ ၉) ဘီလီယံ ကျလာပြီဆိုတာ ကျွန်မတို့ မေလ နောက်ပိုင်းမှ သိရတာ။ သိရတဲ့ နောက်ပိုင်း အိုးအိမ်ဦးစီဌာနက ဆရာကြီးဦးမင်းထိန် က Show Room ကိုလာပြီး ယုဇနပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ ဒါတွေဖြစ်လာပြီ ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ကို ခေါ်ဆွေးနွေးတယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းက ပါတယ်။ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းက ပါတယ်။ကျွန်မတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ပြည်သူလူထု အချို့တဝက် ပါတယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဘတ်ဂျက်ကို ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် မြောင်းများ ဖောက်လုပ်ရေးနဲ့ လမ်းများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ချပေးလိုက်တာလို့ သိရတယ်။ ဆရာကြီးဦးမင်းထိန်က ကျွန်မတို့ကို ပြောတာတော့ ငါးထပ်ဈေး ဆောက်ပေးမယ်။ ပန်းခြံလုပ်ပေးမယ်။ အဲဒီလို ပြောလာတယ်။ ပြောလာတဲ့အခါ ဆရာအဲဒါတွေ က လောလောဆယ် ခဏထားပါဦးပေါ့။ ကျွန်မ တင်ပြစရာရှိလို့ တင်ပြပါရစေဆိုပြီး ယုဇနရဲ့ လမ်းတွေကိစ္စ၊ ယုဇနလမ်းတွေပေါ်က ဈေးဆိုင်တွေကို ဈေးထဲက ဈေးရုံတွေမှာ စနစ်တကျ ပြန်ရောင်းချနိုင်ဖို့ ကိစ္စ၊ တိုက်ခန်းတွေ ယိုယွင်းပျက်စီးတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စ၊ ကျောင်းသားဦးရေနဲ့ ကျောင်း မလုံလောက်ဘူး ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရယ် ကျွန်မတင်ပြခဲ့တဲ့အခါ ဆရာကြီးဦးမင်းထိန်က အဲဒါတွေ အားလုံးအတွက် အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ တိုက်တွေခိုင်ခန့်မှု စစ်ဆေးဖို့လည်း သူညွှန်ကြားပေးပါ့မယ်၊ ဈေးဆိုင်တွေ ကိုလည်း ဈေးရုံထဲမှာ ရောင်းနိုင်ဖို့ သူညွှန် ကြားပေးပါ့မယ် လို့ ပြောတယ်။ ဈေးရုံထဲမှာ ရောင်းချနိုင်အောင် အမြန်လုပ်ပေးဖို့ ယုဇနကုမ္ပဏီကို ပြောပေးပါ့မယ် လို့ ပြောတယ်။ နောက် မိလ္လာကန်တွေနဲ့ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ဖို့ကို စည်ပင်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ပေးဖို့၊ အိမ်ယာကော်မတီ အသစ်ဖွဲ့ပေးဖို့၊ ရေမီတာတွေနဲ့ သုံးစွဲတဲ့ကိစ္စတွေ တိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့အခါ ဦးမင်းထိန်က ပြောတဲ့စကားတွေအကုန်နားထောင်ပြီး သူ့ဘက်ကလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေ ပြောပေးခဲ့တယ်။ အခု ဘတ်ဂျက် ကျပ် (၄ ဒသမ ၉) ဘီလီယံ ကျလာတဲ့ အခါမှာလည်း အဲဒီကိစ္စတွေ လုပ်မှာပေါ့။
ငြမ်း – ခုနက မေးခွန်းက အဲဒီ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အခါ ဘယ်ဌာနတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုတာကိုမေးတာပါ။
DPPK – သြော် ဟုတ်ကဲ့၊ ဘတ်ဂျက် ကျလာတဲ့အခါ မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ငြမ်း – အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်အနေနဲ့ ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍမျိုးက ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလဲ။
DPPK – ဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို သူတို့သိရှိအောင် ကျွန်မက တင်ပြပေးတယ်။ သူတို့က အကောင်အထည် ဖော်ပေးတယ်။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပြည်သူတွေကို နားလည်အောင် ရှင်းပြတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကပါ။
ငြမ်း – ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ လျာထားချက်တွေထဲမှာ ဒေသန္တရ ဆေးပေးခန်းတို့၊ လုံခြုံရေးအတွက် CCTV တပ်တာတို့၊ လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်တပ်တာတို့ အဲဒီ အချက်တွေ ပါတယ်လို့သိရပါ တယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ဒေသခံတွေအတွက် အရေးတစ်ကြီး လိုအပ်တဲ့ ဒေသန္တရ ဆေးပေးခန်းကို အရင်မလုပ်ဘဲ သူ့လောက် အရေးမကြီးတဲ့ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် တွေကို ဘာကြောင့် ဦးစားပေးလုပ်ရတာလဲ။
DPPK – အခုပြောတဲ့ဟာက ကျပ်သိန်း(၅၀) ဘတ်ဂျက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပါ။ကျပ်သိန်း(၅၀) ဘတ်ဂျက်က (၉၄) ရပ်ကွက် တစ်ခုတည်း အတွက်ပါ။ အဲဒီ ဘတ်ဂျက်ကို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ (၉) ဦးကော်မတီနဲ့ တိုင်ပင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကော်မတီမှာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက (၃) ယောက်၊ ကျွန်မတို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဘက်က (၃)ယောက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဘက်က (၃) ယောက်ဆိုပြီး ကျွန်မတို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ တယ်။ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဆိုပြီးပေါ့။ အဲဒီမှာ ရပ်ကွက်တိုင်းက သူ့တို့ရပ်ကွက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တင်ပြခဲ့ကြတယ်။ တင်ပြတဲ့အခါမှာ (၉၄) ရပ်ကွက်က ဘာတင်ပြလဲဆိုရင် အဲဒီကိုးဦးထဲမှာ ပါတဲ့တစ်ချို့က ပါတီတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆေးခန်းတစ်ခုကို အဲဒီသိန်း(၅၀)ကို ပေးစေချင်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်က လည်း နောက်ပါတီတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက် ဆေးခန်းတစ်ခုကို အဲဒီသိန်း(၅၀) ကိုလှူ ချင်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း လမ်းကြို လမ်းကြားတွေမှာ လုံခြုံရေးအတွက် CCTV တပ်ပေးစေချင်တယ်။ ကျွန်မတို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီသိန်း (၅၀) ဆိုတာ ပြည်သူပိုင် တာပါ။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေထဲမှာ NLD ထောက်ခံသူ လည်းပါမယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးကို ထောက်ခံသူလည်း ပါတယ်။ တ. စ. ည ကို ထောက်ခံသူ လည်းပါမယ်။ အဲဒီလို ပြည်သူတွေ အားလုံးအတွက် ပေးတဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်လို့ ပါတီတစ်ခုတည်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဆေးခန်းကို မပေးစေချင်တာပါ။ အဲဒီမှာ တချို့က ဆေးခန်းဘက်ကို ဝိုင်းဆွဲကြတဲ့အခါ အခုလို ဖြစ်လာ တာပဲ။ အဲဒီတော့ ကျွန်မက ပါတီတစ်ခုတည်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ကိစ္စတွေ အတွက် မပေးသင့်ဘူး။ ဒါက ပြည်သူအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုပဲ လုပ်သင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ တစ်ခါ လမ်းကြားတွေမှာ CCTV တပ်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ သိန်း (၅၀) နဲ့က CCTV တပ်လို့ မရပါဘူး။ ယုဇနကလမ်းတွေမှာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေ တပ်မလဲ၊ အဲဒီအတွက် Control Center ကို ဘယ်လိုထားမလဲ ။ CCTV ကိစ္စက သိန်း (၅၀) နဲ့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ ကျွန်မကို ပြည်သူတချို့က ဘာပြောလဲဆိုရင် ကျွန်မတို့ ယုဇနထဲကို ဝင်လာရင်(၁၇) လမ်းက ဘယ်နားမှန်းမသိ၊ (၁၅) လမ်းက ဘယ်နားမှန်းမသိ၊ (A) Block ဆိုတာက ဘယ်နားမှန်း မသိ ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောကြတဲ့အချက်ပေါ် မူတည်ပြီး လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်တွေ လုပ်သင့်တယ် ဆိုတော့ လမ်းတိုင်းကို အဲဒီလို လုပ်သင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီ (၉)ဦး ကော်မတီထဲမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေး လွန်ဆွဲကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ တိုင်ပင်ထားတဲ့ ရလဒ်က ဒီလမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ် ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဆေးခန်းကို မလှူဘူးဆိုတာက ပါတီတစ်ခုတည်းကို ကိုယ်စားပြုသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါ။ ကျွန်မတို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်လာတော့ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ ဆိုင်လာပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီ ကျပ်သိန်း (၅၀) ရလာတော့ ပြည်သူအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တာဖြစ်လို့ အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တာပါ။
ငြမ်း – အခုရေနုတ်မြောင်းတွေ ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ စီစဉ်တဲ့အခါ ပထမတော့ တစ်လမ်းကျော် လုပ်မယ်လို့ သိရတယ်။ နောက်တော့ နှစ်လမ်းကျော် လုပ်မယ်လို့ ပြောင်းသွားပြန်တယ်။ ရေမြောင်းပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်မယ့် ကိစ္စကို ပညာရှင်တွေ တိုင်းတာတွက်ချက်မှုအရ လုပ်တာပါလို့ ပြောထားတော့ ပညာရှင်တွေရဲ့တွက်ချက်မှုက ရက်ပိုင်း အတွင်း အခုလို အမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
DPPK – ပညာရှင်တွေက မြောင်းတွေကို ဆာဗေးဆင်းတယ်လို့ သိခဲ့ရတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့က လာလုပ်တာလဲ။ ဘယ်လမ်းတွေကို ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ လုပ်မှာလည်း ဆိုတာကို ကျွန်မ မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်ကမှ သိရတာ။ အဲဒီတော့ လည်း တစ်လမ်းခြား လုပ်မယ်ဆိုလို့ တစ်ချို့လမ်းတွေ ပြန်ဖျက်ခဲ့တာ ဆိုတဲ့ Report တွေလည်း ကျွန်မတို့ဆီ မတက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေကြားမှာ ပြောနေကြတာက ကောလဟာလပါ။ နောက်ဆုံး ပြည်သူတွေက ပြောလိုက်ရင် “တို့လမ်းတွေ ပါတယ်။ သူ့လမ်းကိုကျတော့ ကျော်သွားတယ်”ဆိုပြီး ပြောလာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ ခေါ်ယူ မေးမြန်းကြည့်တော့ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် (Sea Level) နဲ့ချိန်ပြီး လုပ်သင့်တဲ့ နေရာမှာ သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်၊ ရေနုတ်မြောင်းကွန်ရက် (Network) ပုံစံ ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ လမ်းနာမည်တွေကို ကျွန်မတို့ မသိခဲ့သလို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ဆင်းတိုင်းသွားလဲ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ တို့ကတော့ ကြားတော့ ကြားနေရတယ်။ ယုဇနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လမ်းတွေ ဆားဗေး လုပ်နေတယ်။ မြောင်းတွေ ဆာဗေး လုပ်နေတယ် ဆိုတာကျွန်မတို့ သိရတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ကဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘယ်လမ်းတွေကို လုပ်တာလဲဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်ကမှ သိရတာပါ။ အဲဒီအတွက် Viber ကနေ ပို့လိုက်တဲ့ စာရင်းရမှ ပြည်သူကို စာရင်းဇယား ချပြနိုင်တာပါ။
ငြမ်း – အဓိက ကျတဲ့ မိန်းလမ်းကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ပိတောက်လမ်း၊ (၅)လမ်း၊ (၁၁)လမ်း လိုလမ်းတွေက ရေမြောင်းတွေ ကို ပြုပြင် အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ဦးစားပေး မလုပ်ဘဲ သာမန် လမ်းသွယ်လေးတွေကိုပဲ လုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားတော့ ဒေသခံ အများစုက နားလည်ရ ခက်နေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် နေတဲ့ လမ်းဟာ တစ်လမ်းကျော် စီစဉ်တုန်းကလည်း မပါသလို နှစ်လမ်းကျော် စီစဉ်တော့လည်း မပါဘူး။ အဲဒီတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အိမ်ရှေ့ကအဆောက်အဦ ဖျက်ရမှာစိုးလို့ ချန်ထားခဲ့တာလား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါကိုရော ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲ။
DPPK – အဲဒါလည်း ကျွန်မပြောသလိုပါပဲ။ ပညာရှင်တွေ လာတိုင်းတယ်။ သူတို့ (Sea Level) နဲ့တိုင်းပြီး ချိတ်ဆက် လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မလမ်းပါတာ မပါတာ ကတော့ ပညာရှင်တွေကို မေးမှ သိမှာပါ။ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနတောင် ကျွန်မ ဒီမှာ ဆေးခန်းဖွင့်တာ မနေ့ကမှသိတယ်။ သူတို့လည်း ကျွန်မ ဘာလုပ်လည်း ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မက စကားချိတ်ဆက် ပြောတာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ အဲဒီလို ပါတာ မပါတာ ကတော့ ကျွန်မနေတဲ့ လမ်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ သူတို့ဘာသာ ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။
ငြမ်း – ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ကိုယ့်ဒေသအကျိုးအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာအဆိုတင်တာ မေးခွန်မေးတာတွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ရှိခဲ့ပါသလဲ။
DPPK – အဆိုတင်တာတော့ ကျွန်မ မလုပ်ခဲ့သေးဘူးပေါ့။ ဒေသခံတွေ လိုအပ်တဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ ဆယ်ကြိမ်နဲ့ ဆယ့်ငါးကြိမ် လောက်တော့ မေးခဲ့တယ်။အဲဒါတွေကတော့ ယုဇနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ (၇၈) ရပ်ကွက် မီးလင်းရေးကိစ္စတွေ၊ နောက်တစ်ခါ စည်ပင် အမှိုက်ပုံးကိစ္စတွေ၊ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းတဲ့ကိစ္စ၊ တိုက်ခန်းများကြံ့ခိုင်မှုကိစ္စတွေကို မေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမေးတာ မေးခွန်းတော့ များပါတယ်။ အဆိုတော့မတင်ခဲ့ပါဘူး။
တိုးချဲ့ထားတဲ့ကိစ္စ ဆိုတာကတော့ ကျွန်မ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မဖြစ်ခင် ကတည်းကလေ။ ကျွန်မတို့ ယုဇနမှာ နေတယ်။ နေတဲ့အခါမှာ လူတွေ တော်တော် များများကလည်း အဲဒီလိုပဲ ဆောက်ကြ တယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ တွေက လည်း လာမတားဆီးတဲ့ အတွက် ကျွန်မတို့က ဒီလိုမျိုးဆောက်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖျက်ပေးပါဘူးလို့ မပြောဘူး။ အားလုံးဖျက်ရမယ့် အတိုင်းအတာမှာဆို ကျွန်မ ဖျက်ပေးပါမယ် …
ငြမ်း – ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် မေးမြန်တဲ့ မေးခွန်တွေကို တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဘက်က ဘယ်လို တုံ့ပြန်ပါသလဲ။
DPPK – မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။ အခုဆို ကမ်းနားလမ်း မကြီးကို ပိတ်ပြီး အဆောက်အဦ ဆောက်ထားတာတို့၊ ကမ်းနားလမ်း တစ်ဆက်တည်း မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ ပြန်ဖောက်ပေးဖို့ကိစ္စတွေ၊ (၇၈) ရပ်ကွက် မီးလင်းရေးကိစ္စ၊ (၇၈) ရပ်ကွက် လမ်းဖောက်ရေး ကိစ္စတွေ အဲဒါတွေကို အစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။ ခုဆိုရင် ယုဇန တိုက်ခန်းတွေရဲ့ ခိုင်ခန့်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆာဗေးလုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေ လာပါပြီ။
ငြမ်း – မေးခွန်အများစုက ကြယ်ပွင်ပြမေးခွန်း အနေနဲ့ မေးတာလား။
DPPK – ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းလည်းမေးခဲ့တယ်၊ ကြယ်ပွင့်ပြအဆင့် မဟုတ်တဲ့ မေးခွန်းအများစုကိုလည်း ဝန်ကြီးချုပ်တို့၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်တို့ကို ကျွန်မ စာနဲ့ပဲ သွားခဲ့တယ်။ အားလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ က ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ငြမ်း – လူမှုကွန်ရက်မှာ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် ပြောထားတာ တစ်ခုရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တွေ၊ နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ပေါ် တက်လာတာ ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီတော့ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ခံယူချက် ကို ပြောပြပေးနိုင်မလား။ တစ်ဆက်တည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်း က ၈၈တို့၊ ၉၆ တို့၊ ၂၀၀၇ တို့မှာ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်းနောက်ခံလေးကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
DPPK – နိုင်ငံရေးခံယူချက်က အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောင့် ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ ကျွန်မ ပြောရမှာပေါ့။ ကျွန်မက ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ မွေးတဲ့အတွက် ၈၈ အရေးအခင်းမှာ သူငယ်တန်းပဲရှိသေးတာ၊ သူငယ် တန်း ပဲ ရှိသေးတော့ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ ဝင်ရောက်လုပ်ဆောင်မှု မရှိသေးဘူးပေါ့။ ကျွန်မ ဘာမှလည်း မသိခဲ့ဘူးပေါ့။ ကျွန်မ စိတ်ဝင် စားတာ ကျွန်မတို့ အမေစုရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ကိုလည်း အရမ်းပြောင်းလဲချင်တယ်။ ကျွန်မတို့နေရတဲ့ ပညာရေး စနစ်တွေ၊ နေထိုင်ရတဲ့ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေ အနေအထား အားလုံးကို ကျွန်မ ပြောင်းလဲ ချင်လာတဲ့အတွက် ကျွန်မ အမေစု ပြောစကားတွေကို အရမ်းလက်ခံတယ်။ လက်ခံတဲ့အတွက် ၂၀၁၂ မှာမှ နိုင်ငံရေးကို စ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ငြမ်း – ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းမှာ ဝန်ကြီးတစ်ချို့နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် တစ်ချို့နုတ်ထွက်သွားတယ်။အဲဒီကိစ္စကိုရော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
DPPK – အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးရှိလာတာဆိုတော့ ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ အများဆုံးသိရမှာ။ ကျွန်မက ကောလာဟလ တွေပဲ ကြား တယ်။ ဒါတွေက အမှန်တွေ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ ပါတီအနေနဲ့ ကလည်း လိုအပ်လို့ ထိန်းသိမ်းရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိမယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
ငြမ်း – NLD ပါတီက တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ အောက်ခြေ ပြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံပြ ဿနာတွေအတွက် ထိရောက်မှုနည်းတယ် ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဌ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
DPPK – ကျွန်မတို့ပါတီက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရတာက အရမ်းကို ယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေရ သလိုမျိုးဆိုတော့ တစ်ချို့ ကိစ္စလေးတွေမှာ မအောင်မြင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါ တယ်။ အဓိက က စီးပွားရေး၊ ပညာရေး စတဲ့ ကဏ္ဍအတော်များများ ကျနေတာ။ အဲဒီလို အခြေအနေကနေ နှစ် နှစ် အတွင်းမှာ ဝုန်းဆို ရုန်းထွက်ဖို့က မလွယ်ဘူး။ ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို ကျွန်မတို့က တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်း မဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရင်တောင် ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရဲရဲပြောရဲပါတယ်။
ငြမ်း – နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေပေါ်မှာ NLD ပါတီ နဲ့ အစိုးက လျစ်လျူရှုထားတယ် ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကိုရော ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
DPPK – အဲဒါကတော့လည်း အစိုးရဆိုတာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အတွက်ချည်းပဲ လုပ်နေရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူ အားလုံး ကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့၊ ကောင်းတဲ့စနစ်ဆီကို ပြောင်းလဲ ဖော်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ကို လျစ်လျူ့ရှု နေတယ်လို့ကျွန်မ မမြင်ပါဘူး။ ပါတီအနေနဲ့ကလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အစိုးရတစ်ခု အနေနဲ့ ကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိစ္စတစ်ခုတည်းကို လုပ်နေရတာမဟုတ်ဘဲ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ များတာကြောင့် သူက အားလုံးကို ပျမ်းမျှ လုပ်ရတဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ လျော့ရဲတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ လုံးဝမကြည့်တာတော့ မဟုတ်လောက် ပါဘူး။
ငြမ်း – ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်က လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူခိုင်ရဲ့ တိုက်ခန်းနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ရုံးခန်းတွေကို လမ်းမြေပေါ် ဥပဒေမဲ့ ကျူးကျော် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာကိုဘာပြောချင်ပါသလဲ။
DPPK – အဲဒီ တိုးချဲ့ထားတဲ့ကိစ္စ ဆိုတာကတော့ ကျွန်မ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မဖြစ်ခင် ကတည်းကလေ။ ကျွန်မတို့ ယုဇနမှာ နေတယ်။ နေတဲ့အခါမှာ လူတွေ တော်တော် များများကလည်း အဲဒီလိုပဲ ဆောက်ကြ တယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ တွေက လည်း လာမတားဆီးတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့က ဒီလိုမျိုးဆောက်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက် အနေနဲ့ မဖျက်ပေးပါဘူးလို့ မပြောဘူး။ အားလုံးဖျက်ရမယ့် အတိုင်းအတာမှာဆို ကျွန်မ ဖျက်ပေးပါမယ်။
ငြမ်း – ဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဇန်နဝါရီ(၃)၊ ၂၀၁၈၊ ရန်ကုန်
Tags: NLD ပါတီ, ပြည်သူ, ဖွံ့ဖြိုးရေး, ယုဇန, လွှတ်တော်, အစိုးရ
စံပယ်တွေကို ချစ်တဲ့ သူပုန်စိတ်နဲ့ ဖိုးခွားလေး
တစ်ဘက်ကလည်း ပြောရရင် လုပ်သင့်တာပေါ့